China Harmonic Reducer HCSG-20-100-2UH စက်ရုံနှင့်ထုတ်လုပ်သူများ သဟဇာတ
စမတ် Conveyor ကြိတ်စက် Drive ကို
သဟဇာတ Reducer HCSG-20-100-2UH
သိသိသာသာမြင့်မားသောနည်းပညာဆိုင်ရာဆန်းသစ်တီထွင်မှုများ၊ ကြွယ်ဝသောထုတ်ကုန်များတည်ဆောက်မှုကိုသဘောပေါက်ခြင်းနှင့်ဖောက်သည်များအားအကောင်းဆုံးမော်ဒယ်လ်ကိုရွေးချယ်နိုင်ခြင်းတို့အတွက် HCSG / HCSF စီးရီးပေါင်းစပ်ပုံစံ သူတို့ရဲ့ကိုယ်ပိုင်အရသိရသည်။
HCSG / HCSF စီးရီးပေါင်းစပ်ထုတ်ကုန်သည်အဓိကအစိတ်အပိုင်းဖြစ်ပြီးအစိတ်အပိုင်းကိုပေါင်းစပ်ထားသောထုတ်ကုန်တစ်ခုဖြစ်သည်။ ပြင်ပဝန်များ (အဓိကအ ၀ တ်များ) ကိုတိုက်ရိုက်ပံ့ပိုးမှုအတွက်တိကျမှု၊ မြင့်မားမှုဒဏ်ခံနိုင်သည့် cross roller bearings ။
ပုံစံကို install လုပ်ခြင်း
2. မြင့်မားသော torque စွမ်းရည်
6. ငါ / O coaxial
နှစ်ချက်ကို arc သွားယန္တရား
Double arc သွားသည် KMI drive ၏လိုအပ်ချက်များကိုဖြည့်ဆည်းရန်မူလသွားယန္တရားတစ်ခုဖြစ်သည်။ သွားပရိုဖိုင်းကို double arc သွားပရိုဖိုင်းနှင့်ထူးခြားသောအထူးကွေးတစ်ခုရှိပြီးအတူတူသွားပရိုဖိုင်းနှင့်အဆက်မပြတ်ထိတွေ့နိုင်သည်။ ထို့အပြင်သွားအထူနှင့်သွားအောက်ခြေရှိ R နှင့်နှိုင်းယှဉ်ပါက groove ၏အကျယ်ကိုတိုးချဲ့ခြင်းအားဖြင့်စိတ်ဖိစီးမှုကိုလျော့နည်းစေသည်။
Gear အဆက်အသွယ်စတင်မှု၏အစမှဆက်လက်ပါလိမ့်မယ်။ ဂီယာ၏အဆက်မပြတ်ထိတွေ့မှုမှတစ်ဆင့်တစ်ချိန်တည်းတွင်ပါဝင်သောသွားအရေအတွက်သည်သွားစုစုပေါင်း၏ ၃၀% ခန့်သို့ရောက်ရှိလိမ့်မည်။ double circular arc သွားပရိုဖိုင်းပါသည့် KMI drive သည်ရိုးရာမော်ဒယ်များ၏ချောချောမွေ့မွေ့ကိုထိန်းထားနိုင်ပြီးတိကျမှု၊ အစွမ်း၊ မာကျောမှု၊
ယခင်: Harmonic Reducer HCSF-32-100-GH-FO
နောက်တစ်ခု - သဟဇာတ Reducer HCSG-25-100-2UH
မြင့်မားသော Precision Reducer
Inline Planetary Gear ကိုလျှော့
Planetary Gear ကိုလျှော့
Planetary Reducer အတွက်
Planetary Speed ​​Reducer
ညာဘက်ထောင့် Planetary လျှော့
Right Angle Speed ​​Reducer
ညာဘက်ထောင့် Worm ဂီယာ Reducer
သဟဇာတ Reducer HCSG-25-100-2UH
သဟဇာတ Reducer HSHF-32-100-2UH
ရုံးချုပ် - အခန်း ၁၀၁၁ ပထမအဆောက်အအုံအမှတ် ၈ Pinggang လမ်း၊ Fengxian Dist ။ ရှန်ဟိုင်း, 201410, တရုတ်
စျေးကွက်ရှာဖွေရေးစင်တာ - အခန်း ၁၅၀၈ Huaxia Mansion၊ အမှတ် ၁၈၁ Zhongshan လမ်း၊ Gulou Dist ။ နန်ကျင်း, 210009, တရုတ်
အီးမေးလ် - jackynanjing@163.com လျ